Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2017 → mars → 25 → Depioten’ny Toamasina I : “Manahy ady saritaka noho ny fitsaram-bahoaka”
Namoaka ny heviny tamin’ny fiantsoana mpanao gazety tao amin’ny trano filanonana “La Famille” Salazamay ny alakamisy tolakandro teo, ny depioten’i Toamasina I, Famindra Justin. Nandritra izany no nanazavany ny heviny mikasika ity firongatry ny “fitsaram-bahoaka” eto amintsika ity.
“Efa tsy matoky intsony ny rafi-pitsarana misy ny vahoaka; mafy ihany koa ny lonilony andavanandrom-piainany izay miteraka rarin-tsaina aminy ka mahatonga ny fahasorenany sy ny hatezereny…”, izay no nambaran’Atoa Famindra Justin mikasika ny fahitany ny firongatry ny “fitsaram-bahoaka”. Nomarihany fa “atahorana hiteraka disaisam-piarahamonina sy tondro molotra ary ny halako bika tsy tiako tarehy izany raha hitohy; ka atahorana hivadika ny raharaha, ho lasa ady saritaka eo anivon’ny fiaraha-monina…”. Ho an’ity solombavambahoaka voafidy teto Toamasina ity dia loza mitatao ho an’ny fanjakana sy ny mpitondra ny zava-misy raha tsy misy ny fandraisana fepetra hentitra, amin’ny famerenana ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny fampanajana ny lalana, sy fanasaziana ireo mpiasam-panjakana sy mpiasam-bahoaka mahatonga ny olana, ary fanazavana ny tena marina amin’ny zava-misy sy ny zava-mitranga eny anivon’ny vahoaka. Nanolotra soso-kevitra ihany koa anefa ny depiote Famindra Justin raha nanazava ny heviny mikasika ity “fitsaram-bahoaka” mirongatra eto amintsika ity. Aminy dia ny “fanjakana ihany no vahaolana voalohany” amin’izany. Eo ihany koa ny fanovana ny toe-tsaina ho an’ny Malagasy amin’ny fampanajana ny soatoavina manome hasina ny aina.
Ankoatra izany dia nambaran’ny depiote Famindra Justin hatrany fa tsy hahasoa ny Malagasy izao zava-misy izao; ka isan’ny tsy mankasitraka, sy tsy mankamasina izany ny tenany. Koa maniry izy ny mba tena hijeren’ny depiote izao raharaha izao mandritra ny fivoriana ara-potoan’izy ireo ny volana may.